छोरा या छोरी के जन्मिने ? थाहा पाउँनुहोस् यी १४ सरल घरेलु तरिका – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Health/छोरा या छोरी के जन्मिने ? थाहा पाउँनुहोस् यी १४ सरल घरेलु तरिका
काठमाडौ । कुनै एक महिला गर्भवती हुनु सम्पूर्ण परिवारको लागि खुशिको पल बन्छ । घरमा आउने नयाँ सदस्यलाई लिएर अनेकौं सपना बुन्न थाल्दछन्। त्यो शिशु छोरा या छोरी के होला सबको मनमा कौतोहलता सुरु हुन्छ । यद्यपी कुनै प्रविधिको प्रयोग गरेर लिं’ग छुट्याउँनु कानुनी रुपमा बर्जित छ
यो कार्य नगर्नुहोला । तर घरेलु उपाय अपनाउँने चलन निक्कै छ । प्रकृतिले गर्भमा नै मनुष्यको लि’ङ्ग निर्धारण गरेको हुन्छ वास्तवमा, शिशुको जन्म भन्दा पहिले लिं’ग’ पत्ता लगाउनु नेपाल, भारत लगायत केहि देशमा अ’पराध जस्तै मानिन्छ । उनीहरुको कानूनले कुनै पनि टेक्नोलोजी वा मेशिनको सहायताले जन्म भन्दा पहिले भ्रु’णको लि’ङ्ग परीक्षणको लागि अनुमति दिँदैन। केहि व्यक्तिले लक्षणका आधारमा शिशुको लि’ङ्गकोअनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जीवविज्ञान अनुसार दुई प्रकारका क्रो’मोजो’म महिला र पुरुषमा पाइन्छन्। महिला अं’डाश’यमा ए’क्स ए’क्स क्रो’मोजो’म हुन्छ र पुरुष शु’क्रा’णुमा ए’क्स’ वा’ई क्रो’मोजो’म हुन्छ। ए’क्स ए’क्स क्रो’मोजो’मले छोरी र ए’क्स वा’ई क्रो’मोजो’मले छोराको निर्धारण गर्दछ। जब
पुरुष शु’क्रा’णुको वा’ई क्रो’मोजो’म, महिला अं’डाश’यको ए’क्स क्रो’मोजो’म संग मिलन हुन्छ, यस्तो अवस्थामा छोरा जन्मन्छ। त्यस्तै गरी, यदि पुरुष शु’क्रा’णुको ए’क्स क्रो’मोजो’म, महिला अ’ण्डाश’यको ए’क्स क्रो’मोजो’म संग मिलन भए छोरी जन्मन्छ।
पेटको आकार : गर्भवती महिलाको पेट भारी र तलतिर झुकेको भए गर्भमा छोरा भएको अनुमान लगाउने गरेको पाइन्छ
छाला परिवर्तन : गर्भावस्थामा छाला परिवर्तन सामान्य मानिन्छ ।तरपनि गर्भमा छोरा छ भने गर्भवती महिलाको अनुहारमा दाना र दागहरू बढी देखिन्छन्। यस बाहेक, गर्भवती महिलाको अनुहार सुकेको जस्तो देखिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।